आज हामी त्यहि जडिबुटीको रुपमा लिईने अम्बाको पातको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ । अम्बा तपाइ हामी सबैलाई थाहा छ । हामी अम्बा निकै स्वाद लिएर खाने गर्छौँ तर त्यहि अम्बाको पात सेवन गर्नु पनि निकै फाईदा हुन्छ भन्ने हामी मध्ये कतिलाई थाहा नभएको हुनसक्छ । अम्बाको पात एन्टीअक्सिडेन्ट, एन्टीब्याक्टेरियल जस्ता गुुणले भरिएको हुन्छ । छाला, कपाल र स्वास्थ्यको लागि अम्बाको पातको प्रयोग निकै लाभदायक हुन्छ ।
अम्बाको पातबाट पाइने फाइदाहरु :
अम्बाको पातको रस निकालेर खानाले शरीरको तौल कम गर्न सकिन्छ ।
मधुमेहका रोगीले अम्बाको पात सेवन गर्नु निकै लाभदायक हुन्छ ।
अम्बाको पातको रस पिउने गर्नाले उच्च रक्तचाप कम हुन्छ ।
पखाला लाग्दा अम्बाको पात खायौँ भने पखाला रोकिन्छ ।
पाचन तन्त्रको तन्दुरुस्त राख्नको लागि अम्बाको पात लाभदायक मानिन्छ ।
– यसकारण मान्छेको सुतेकै ठाउँमा मृत्यु हुने रहेछ ! यी हुन् निदाएकै बेलामा मृत्यु हुने खतरनाक रोगहरु
एउटा अनुसन्धानले स्लिप एप्निया भएको मानिसले सवारी चलाउँदा दुर्घटना हुने सम्भावना १२ प्रतिशत बढी हुने देखाएको छ । स्लिप एप्नियाका रोगीले सवारी चलाउनु अत्यन्त खतरनाक हुन्छ। ‘पिपुल’ म्यागाजिनलाई फिसरकी छोरी लुअर्डले भनिन्, ‘मेरी आमा जीवनभर लागुऔषधको कुलत र मानसिक बिमारीसँग लडीरहनु भयो र अन्त्यमा त्यसैले उहाँको ज्यान गयो।’ – बिबिसी
मह खादै हुनुहुन्छ ? विचार पुर्याउनुहोस् नत्र ज्यानै जान सक्छ